प्रहरी बढुवामा किन परेनन् महिला ? | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
प्रहरी बढुवामा किन परेनन् महिला ?
काठमाडौं, साउन ६ गते । नेपाल प्रहरीको एक सय ८० उच्च अधिकृत पदमा बढुवा सिफारिस हुँदा त्यसमा एक जना पनि महिला परेका छैनन्। हाल पदोन्नतीका लागि योग्यता पुगेका महिला अधिकृतहरु नै नभएका कारण अझै लामो समय प्रहरीको उच्च पदाधिकारीमा समावेशी हुन नसक्ने स्थिती देखिएको हो।
जनपदतर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (एआईजी), प्रथम श्रेणी (डीआईजी र एसएसपी ) र दितीय श्रेणी (एसपी र डीएसपी)का लागि बढुवा सिफारिस भई सकेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यलयले एआईजीमा ११, डीआईजीमा १५, एसएसपीमा २५, एसपीमा ३५ र डीएसपीमा ९४ जना बढुवा सिफारिस गरेको हो।
प्रहरीमा महिला अधिकृत नै नभएका होइनन्। तर, एक दशक अघिसम्म राजपत्रांकित पद (इन्सपेक्टरदेखी माथि) अति कम महिलाले मात्र नाम निकालेकाले बढुवामा महिलाको उपस्थिति यसपटक नदेखिएको हो। हाल जनपदतर्फ एसपीसम्म महिला भए पनि बढुवाका लागि उनीहरुको समय पुगिसकेको छैन।
२०६३ साल अघिसम्म प्रहरी भर्नामा जनपदको खुलातर्फ महिला आरक्षणको व्यवस्था थिएन। प्रहरीमा जागिर खान खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपथ्र्यो। यसै कारण निकै कम संख्यामा मात्र महिला नेपाल प्रहरीको माथिल्लो पदमा पुगेका छन्। विमला थापा र पार्वती थापाले डीआईजीबाट अवकाश पाउनु भएको थियो। गिता उप्रेतीले एसपीबाट अवकाश पाउनु भयो।
जनपदतर्फ हाल पाँच जना महिला एसपी छन्। पुजा सिंह, मिरा चौधरी, किरण बज्राचार्य, दुर्गा सिंह र किरण राणा एसपी छन्। यीमध्ये पुजा सबैभन्दा सिनियर महिला अधिकृत हुन्। उनको ब्याचबाट यसपटक केही एसएसपीमा बढुवा भएका छन्। २०५० सालको इन्सपेक्टर ब्याचमा चार जना महिलाले नाम निकालेका थिए। मिरा, किरण बज्राचार्य, दुर्गा र किरण राणाले त्यतिबेलै इन्सपेक्टरमा नाम निकालेका हुन्। त्यसअघिको इन्सपेक्टर ब्याचमा पुजा सिंहले नाम निकाल्नु भएको थियो।
न्सपेक्टरमा चार जना महिलाले एकैचोटी नाम निकालेको करिब पाँच वर्षसम्म नेपाल प्रहरीमा नयाँ महिला इन्सपेक्टर आउन सकेनन्।
हाल जनपदतर्फ चार जना महिला डीएसपी छन्। गंगा पन्त, तारा थापा , रन्जु सिग्देल र बसुन्धरा खड्का डीएसपी छन्।
२०५६ सालको इन्सपेक्टर ब्याचमा गंगा र ताराले नाम निकाल्नु भएको थियो। त्यसपछि नयाँ इन्सपेक्टर आउन तीन वर्ष लाग्यो। २०५८ सालको इन्सपेक्टर ब्याचमा रन्जु सिग्देलले नाम निकाल्नु भयो।
त्यसपछि २०६१ को इन्सपेक्टर ब्याचमा मात्र नयाँँ महिला इन्सपेक्टर देखिए। त्यतिबेला बसुन्धाराले नाम निकालिन्। २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान आएसँगैं महिला आरक्षणको विषय पनि समावेश भयो।
जस अनुसार इन्सपेक्टर पदका लागि हुने खुलातर्फका नियुक्तीको ४५ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरियो। आरक्षण कोटाको २० प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याईयो। हाल इन्सपेक्टरमा रिक्त पदमध्ये ६० प्रतिशत बढुवाबाट र ४० प्रतिशत खुलाबाट गरिन्छ। २०६४ सालको इन्सपेक्टर ब्याचमा अन्जना श्रेष्ठ र दीप्ति कार्कीले नाम निकालेका थिए। पछिल्लो समय भने नेपाल प्रहरीमा महिला प्रहरी अधिकृतको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।
‘आरक्षणले नेपाल प्रहरीमा महिला अधिकृतको संख्या ह्वात्तै बढाएको छ। आरक्षण र खुला दुवैमा नाम निकाल्ने महिला अधिकृतको संख्या पनि धेरै देखिन्छ’, प्रहरी प्रधान कार्यलयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्। इन्सपेक्टरको पछिल्लो ब्याचमा ११ जना महिलाले नाम निकालेका थिए। त्यसअघिको इन्सपेक्टर ब्याचमा १० जना महिलाले नाम निकालेपनि नौ जनामात्र तालिममा सहभागी थिए।- अन्नपूर्ण बाट
7/21/2017 03:28:00 PM